Sabuurradii iyo Gabaygii Sulaymaan—Gabayo Qalbi Qaboojis iyo Waxbarid Keena | Farriinta Kitaabka
Gabayo Quduus ah oo Qalbi Qaboojis iyo Waxbarid Keena
Daaʼuud iyo niman kale baa gabayo caabudaadda loogu talaggalay qoray. Buugga Sabuurradii waxaa ku kooban 150 gabay
BUUGGA ugu dheer oo Kitaabka ka tirsan wuxuu ka sameysan yahay gabayo quduus ah oo ruuxa Ilaahay ku ahaaday. Muddo 1,000 sano leʼeg baa buuggan oo dhan lagu qoray. Buugga Sabuurradii waxaa ku jira erayo ka mid ah kuwo ugu qoto dheer oo iimaanka iyo dareenka dhaqaajiyaa oo weligeed la qoray. Dareemada kala duwan ee binuʼaadanka baa lagu soo bandhigay buuggan. Ha noqoto farxad, ammaan bixin iyo shugri ama baroor, murugo iyo toobadkeen. Waxaa cad inay qorayaashan Ilaahay u dhowaayeen oona aammini jireen. Bal eeg arrimo muhim ah oo lagu soo hadal qaaday gabayadan.
Yehowah waa Kan xaq u leh sayidnimada oo istaahilo caabudaadda iyo ammaanta. Sabuur 83:18 waxaa ku qoran: ‘Adigoo magacaagu [Yehowah] yahay baad tahay Ilaaha ugu sarreeya dunida oo dhan.’ * Sabuurrada qaarkood Yehowah abuurtiisay ku sharfaan. Xiddigaha samada iyo quruxda waxyaalaha dunida ku nool iyo yaabka jirka binuʼaadanka bay ku ammaanaan. (Sabuurradii 8, 19, 139, 148) Kuwo kalena waxay Yehowah ku ammaanaan siduu u badbaadiyo una dhowro kuwa daacad isaga u ah. (Sabuurradii 18, 97, 138) Qaar waxay ku sheegeen inuu yahay Ilaaha caddaaladda kan kuwa la dulmay qalbi qaboojiyo oona ciqaabo kuwa sharka leh.—Sabuurradii 11, 68, 146.
Yehowah kuwa isaga jecel wuu u gargaaraa wuuna qalbi qaboojiyaa. Sabuurta 23aad waxaa laga yaaba inay tahay midda ugu caansan. Halkan Daaʼuud Yehowah wuxuu ku sheegaa inuu yahay adhijir kalgacayl badan mid hoggaamiyo, dhowro oona xannaaneeyo idihiisa. Sabuur 65:2 waxay soo xusuusisaa kuwa caabuda Yehowah inuu yahay Kan baryooyinka maqla. Dembiyada waaweyn kuwa sameeyay waxay qalbi qaboojiis ka heleen Sabuurradii 39 iyo 51. Meelahan Daaʼuud si qiiro leh buu ugu qoray toobadkeenkii xadgudubyadiisii. Wuxuuna soo bandhigay iimaankuu u qabo in cafiska Yehowah. Sabuur 55:22 waxay inagu waanisaa inaan Yehowah aamminno oo culaabteenna iyo welwelkeenna isaga saarno.
Yehowah Boqortooyada Masiixa buu dunida ku beddeli doonaa. Qaybo ku jira Sabuurrada si cad bay uga hadlaan Boqorka la sii sheegay Masiixa. Sabuur 2 waxay sii sheegtay inuu Hoggaamiyahan baabbiʼin doono quruumaha sharka leh oo ka hor imaado. Sabuur 72 waxaa ka muuqdo in Boqorkan gaajo, xaqdarro iyo dulmiba dhammeyn doono. Sabuur 46:9 waxay sheegtaa inuu Ilaahay dagaallada ku joojin doono Boqortooyada Masiixa xitaa hubabka oo dhan buu baabbiʼin doonaa. Sabuur 37 waxaan ka akhrinaa inaynan sii jiri doonin kuwa sharka leh. Waxaana ku qoran in kuwa xaqa ah weligood dunida dhex degganaan doonaan. Iyagoo nabad iyo midnimo ku istareexaya.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay buugga Sabuurradii.
^ qayb. 5 Sidaad u aragtid Ibraahim iyo Muuse oo isticmaalayo magaca Ilaahay oo ah Yehowah eeg Bilowgii 22:14 iyo Baxniintii 17:15.
Buugga Sabuurradii sidee buu u muujiya in Yehowah xukunka xaq u leeyahay?
Sabuurradee baa muujiso in Ilaahay u gargaaro oona qalbi qaboojiyo kuwa isaga jecel?
Buugga Sabuurradii muxuu ka sheegay siduu Yehowah dunida u beddeli doono?
Boqor Sulaymaan wuxuu muujiyay in xitaa taajirnimo xaddhaaf ah aysan mar walba siinayn wuxuu rabo dhanka jacaylka. Gabaygii Sulaymaan wuxuu ku qoray siduu iskugu dayay inuu jacayl ku abuuro gabadh bikrad ah oo wiil adhijir ah jeclayd. Gabaygan ruuxa Ilaahay ku ahaaday wuxuu muujiyaa in dadku si sharaf leh u dhaqmi karaan xitaa markay isku caashaqaan. Wiilkan iyo gabadhan waxay soo bandhigeen iscelin, daahirnimo iyo aamminnimo laga helo.
Wadaag Wadaag Gabayo Quduus ah oo Qalbi Qaboojis iyo Waxbarid Keena